Jahannamo, Kaniisadda Caalamiga ah ee God Switzerland (WKG)
Jahannamada waa go'itaanka iyo ka fogaanta xagga Ilaah ee kuwa dembiilayaasha aan cilaaqaadka lahayn doortay. Axdiga Cusub dhexdiisa, cadaabta waxaa lagu sawiray "barkad holac ah," "gudcur" iyo Gehena (dooxada Hinnom ee u dhow Yeruusaalem, oo ah goob gubanaysa qashinka). Jahannamada waxaa lagu qeexay ciqaab, silica, silica, halaagga weligeed ah, ilmada iyo ilko ilko. Qabiillada iyo Xadiiska, oo ah laba erey oo asal ahaan ka soo jeeda asalka kitaabiga ah oo badanaa lagu turjunto "cadaab" iyo "qabri", inta badan waxay tixraacayaan kuwa dhintay. Baybalku wuxuu barayaa in dambiilayaasha aan toobad keenin ay ku xanuunsanayaan geerida labaad ee barkadda dabka, laakiin si buuxda uma caddeynin inay tani ka dhigan tahay baabi'inta ama ka fogaanta ruuxiga ah ee xagga Ilaah. (2 Tesaloniika 1,8-9; Matayos 10,28; 25,41.46; Muujintii 20,14-15; 21,8; Matayos 13,42; Sabuurradii 49,14-15)
Haddii gacantaada midig ay ku sasabto inay dhacaan, iska jar oo iska tuur. Waxaa kuu wanaagsan in mid ka mid ah addimadaadu ay boobaan oo aan jirkaaga oo dhan jahannamada geli doonin » (Matayos 5,30). Naarta aad bay u daran tahay. Waa inaan qaadnaa digniinta Ciise si dhab ah.
Waxyaabaha aan aaminsanahay ayaa cadaabta ku tilmaamay "Kala sooca iyo ka fogaanta Ilaah ee dembiilayaasha aan tirin karin ayaa doortay". Annagu uma macnayn karno in kala-goyntan iyo kala-goyntu ay tahay silica weligeed ah ama joojinta miyir-qabka. Runtii, waxaan dhahnaa in Kitaabka Quduuska ah uusan tan u caddeynin gebi ahaanba.
Markay cadaabta tahay, sida arimo kale oo fara badan, waa inaan dhagaysanno Ciise. Haddii aan si dhab ah u qaadno Ciise markii uu wax barayo ku saabsan nimco iyo naxariis, waa inaan sidoo kale u qaadannaa si dhab ah markuu ka hadlayo ciqaabta. Ka dib oo dhan, naxariis kama dhigna wax badan haddii aan wax uun la inaga tagin mooyee.
Masaal ahaan, Ciise wuxuu ka digay in kuwa sharka leh lagu tuuro foornada (Matayos 13,50). Maahmaahdan, kama uusan hadlin gubashada, laakiin wuxuu ka hadlaysaa "ilmada iyo ilko-goynta". Masaal kale, Ciise wuxuu ku tilmaamay ciqaabta addoonka oo helay dambi dhaaf oo aan cafiyin addoonkiisii ​​ahaa "cadaab" (Matayos 18,34). Masaal kale ayaa sharxaya qof shar leh oo xidhan oo lagu tuuray "gudcurka" (Matayos 22,13). Gudcurkaas waxaa lagu sharxay meel khamri ah iyo ilko sheekeysi leh.
Ciise sharraxaad kama bixin haddii dadka mugdiga ku jiran xannuun ama murugo, mana sharraxaad ka bixin haddii ay ilko ilko uga baxayaan tawbadkeen ama xanaaq. Taasi ujeedku maahan. Xaqiiqdii, isagu waligii faahfaahin kama bixin masiirka dadka xun.
Si kastaba ha noqotee, Ciise wuxuu si cad ugu digay dadka inaysan ku dhejin wax kasta oo ka dhalanaya iyaga in lagu tuuro dabka weligiis ah. "Laakiin haddii gacantaadu ama lugtaadu ay ku sasabto oo ay kaa dhacdo, iska jar oo iska tuur," Ciise ayaa ka digay. «Waxaa kuu wanaagsan inaad lugla'aan nolosha ama curyaan u ahaatid inaad lahaatid laba gacmood ama laba cagood oo lagu dhex tuuro dabka weligiis ah» (Matayos 18,7: 8). Waxaa wanaagsan inaad naftaada beeniso intii lagu tuuri lahaa "Naarta jahannamada" (V. 9).
Miyaa kuwa sharka leh weligood la ciqaabi doonaa? Kitaabka Quduuska ah waxaa loo fasiri karaa siyaabo kala duwan markan. Aayadaha qaarkood waxay soo bandhigayaan ciqaab weligeed ah, halka kuwa kalena ay soo jeedinayaan waqti xadidan. Laakiin labada dhinacba, cadaabta waa in laga fogaadaa kiis kasta.
Tani waxay i xasuusineysaa buug ay leedahay 'InterVarsity Press' oo ku saabsan mawduuca: Laba Aragti oo Naarta ah (Laba aragti oo cadaabta laga dheehan karo). Edward Fudge wuxuu ku doodayaa in la baabiiyo; Robert Peterson wuxuu ku doodayaa silica weligiis jira. Waxaa jira laba nin oo ku jira jeldiga buuggan, oo labadoodaba gacmahoodu ku yaal hortiisa
madaxa muujinta cabsi ama argagax. Shaxanka waxaa loola jeedaa in lagu muujiyo taas
in kasta oo ay jiraan laba aragti oo ku saabsan cadaabta, waa wax aan qatar ku jirin sida aad u aragto cadaabta. Ilaah waa naxariis badan yahay, laakiin qofka ka hor yimaadda Ilaahay wuu diidaa naxariistiisa sidaa darteedna waa la silcayaa.
Waraaqaha Axdiga Cusub
Ciise wuxuu u adeegsaday sawirro kaladuwan sidii uu u ciqaabi lahaa kuwa diida naxariista Eebbe: dab, mugdi, murugo, iyo baabi'in.
Rasuulladu waxay kaloo ka hadlayeen xukunka iyo ciqaabta, laakiin siyaabo kala duwan bay ugu qeexeen. Bawlos wuxuu qoray: “Laakiin nimcadda iyo cadhada waa kuwa muran badan oo aan runta u hoggaansan, laakiinse addeeca caddaaladdarrada; Dhibaatooyin iyo cabsi ku saabsan nafta kuwa xun oo dhan, marka hore Yuhuudda iyo Gariigta » (Rooma 2,8-9).
Marka laga hadlayo kuwa silcin jiray Kaniisadda Tesaloniika, Bawlos wuxuu qoray: "Waxay ku ciqaabi doonaan ciqaab, halligaad weligeed ah, xagga Rabbiga iyo xooggiisa ammaanta" (2 Tesaloniika 1,9). Taasi waa sababta aan ugu qeexno cadaabta waxaan aaminsanahay inay tahay "ka go'naanshaha iyo ka fogaanta Ilaah".
Ciqaabta Axdiga Hore marka la diido sharciga Muuse waa dhimasha, laakiin qofkii diida Ciise wuxuu mudan yahay ciqaab weyn, Cibraaniyada 10,28: 29 ayaa leh: "Waa wax laga xumaado in lagu dhaco gacmaha Ilaaha nool" (V. 31). Ilaah waa naxariis badan yahay male awaal, laakiin qofku markuu diidayo naxariis, xukunku wuu sii jiraa. Ilaah ma doonayo in qofna ku silco naxdinta cadaabta - wuxuu doonayaa qof kasta inuu u yimaado toobadda iyo badbaadada (2 Butros 2,9). Laakiin kuwa diida nimcadaas cajiibka ah way la kulmi doonaan. Taasi waa go'aankooda, maahan Ilaah. Sidaa daraadeed aaminsanaantayadu waxay cadeyneysaa in cadaabta "lagu doortay dambiilayaal aan laga fiirsanin". Tani waa qayb muhiim ah oo ka mid ah sawirka.
Guusha Ilaah ee ugu dambaysa sidoo kale waa qayb muhiim ka ah sawirka. Wax kasta ayaa la hoos gelin doonaa maamulka Masiixa maxaa yeelay isagu wuu soo furtay wax kasta oo uumay (1 Korintos 15,20-24; Kolosay 1,20). Wax walba waa la hagaajin doonaa. Xitaa dhimashada iyo xukunka kuwa dhintay ayaa dhamaadka lagu baabi'in doonaa (Muujintii 20,14). Baybalku nooguma sheegin sida cadaabta ugu habboon sawirkan, ama annaguna sheegan mayno inaannu naqaanno. Waxaan aaminsanahay oo keliya, in Ilaaha, oo xaqnimo iyo naxariis badan ka buuxaan, uu ku wada qaban doono sida ugu wanaagsan ee suurtagalka ah.
Xaqnimada iyo naxariis Eebbe
Ilaah jacaylku weligiis ma silcin doono dadka, qaar baa leh. Baybalku wuxuu daaha ka qaadaa ilaahay naxariis badan. Taas beddelkeed, waxay ka xorreynaysaa dadka dhibaatadooda halkii ay ka yeeli lahaayeen iyaga weligoodba silica. Caqiido dhaqameedka cadaabta weligeed ah ee ciqaabta, waxay dad badani rumeysan yihiin, inay si khaldan ugu sharraxeyso Ilaah inuu yahay aarsi aargoosi ah, oo tusaale fiican u noqonaya. Intaa waxaa sii dheer, sax ma ahan in lagu ciqaabo dadka weligeed ah nolosha oo qaadatay dhowr sano ama tobanaan sano.
Laakiin fallaagada ka dhanka ah Ilaah waa mid aan dhammaad lahayn oo laga cabsado, ayay leeyihiin qaar ka mid ah fiqigayaasha. Waxaynu ku qiyaasi karno xumaanta waqtiga ay tahay in la sameeyo, waxay sharxaan. Dilku wuxuu qaadan karaa oo keliya dhowr daqiiqo, laakiin xallintu waxay noqon kartaa sannado badan ama qarniyo. Caasinimadu waa ka gees Eebbe waa dambiga ugu xun adduunka, ayay ku andacoonayaan, sidaa daraadeed waxay mudan tahay ciqaabta ugu xun.
Dhibaatada ayaa ah in dadku aysan si fiican u fahmin caddaaladda ama naxariis. Dadku uma qalmaan inay xukumaan - laakiin Ciise Masiix ayaa ah. Isagu wuxuu dunida ku xukumi doonaa caddaalad (Sabuurradii 9,8; Yooxanaa 5,22; Rooma 2,6-11). Waxaan aamini karnaa xukunkiisa, annagoo og inaanu noqon doono mid xaq ah oo naxariis badan.
Marka mowduuca cadaabta la sara kiciyo, qaybo ka mid ah Kitaabka Quduuska ah waxay umuuqdaan inay xooga saarayaan xanuunka iyo ciqaabta, kuwa kalena waxay adeegsadaan sawirada burburka iyo dhamaadka. Halkii aan isku dayi laheyn inaan ka wada hadalno hal sharraxaad midka kale, labadeenaba waxaan u oggolaanaynaa inuu hadlo. Marka ay cadaabta timaado, waa inaan aaminnaa Ilaah, ee ma ahan khayaali ahaan.
Waxkastoo Ciise ka yidhi cadaabta, waxa ugu muhiimsan waa in Ciise yahay xalka dhibaatada. Ma jiro wax xukun dil ah (Rooma 8,1). Waa jidka, runta iyo nolosha weligeed ah.